LAYAABKA: Nin 45 sano ka hor ka carooday xaas labaad oo aabihii guursaday oo dib ugu soo laabtay qoyskiisa - Aayaha
LAYAABKA: Nin 45 sano ka hor ka carooday xaas labaad oo aabihii guursaday oo dib ugu soo laabtay qoyskiisa
Aayaha editorSeptember 27, 2018
Samuel Wambugu oo isaga tagay guriga qoyskiisa oo ku yaal ismaamulka Nyeri ee bartamaha kenya sanadkii 1974 -tii waalidkiisana ay u fisheen in uu geeriyooday ayaa dib ugu laabtay isniintii la soo dhaafay.
Ninkaan ayaa xanaaq uga tagay degaanka uu ku noolaa kadib markii aabihii uu guursaday xaas labaad taasi oo uu ka carooday,waxaana qaraabadiisa ay sheegeen in ay ka sabreen maadama ay u fisheen in uu geeriyooday.
Shacabka ku dhaqan tuulada uu ka soo jeedo ee Gatundu iyo ehelka ninkaan ayaa markii ay arkeen maalintii isniinta waxay muujiyeen cabsi iyaga oo u maleeyay ruuxa ay arkeen uu yahay sida qof qabri ka soo baxay ama soomaalida tiraah reer aakhiraad.
Ms Bilha Wahinga oo ay ilmo adeer yihiin ninkaan 73 sano jirka ah oo ka furtay albaabka gurigooda ayaa sheegtay in aysan aqoonsan,balse hooyada dhashay ayay sheegtay in ay garatay una xaqiijisay in uu yahay Samuel Wambugu.
Hanaanka iyo dadaalada lagu aqoonsaday ninkaan ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka qaatay madaxa arimaha bulshada u qaabilsan dowlda kenya tuulada Gatundu.
Ninkaan ayaa saaxiibada uu ku lahaa tuulada iyo waalidiintiisa ay geeriyoodeen balse waxaa hada nool gabar la dhalatay taasi oo iyadana ku faraxday in walaalkeed ay la midowdo 45 sano kadib.
Samuel Wambugu ayaa ka carooday hab dhaqanka aabihii oo uu sheegay in dhulka iyo hantida uu lahaa uu gacanta ka galiyay xaaskiisa labaad ayaa tilmaamay in uu u dulqaadan waayay uuna go,aansaday in uu tuulada isaga tago.
Markii uu 5 sano maqnaa ayaa aabaha dhalay uu geeriyooday halka hooyadii ay dhimatay bartamihii 1989-kii.
Ninkaan oo dib ugu laabtay tuulada ayaa laba isbuuc ka hor waxaa uu joogay guriga eedadiis oo ku yaal degmada Othaya.
Mar wax laga weydiiyay halka uu ku noolaa ayaa waxuu sheegay in qeyb ka mid ah 45-tii sano uu joogay ismaamulka Elgeyo Marakwet ee gobolka rift valley,halkaasi oo uu ku maareyay noloshiisa.
Dhanka kale waxaa uu sheegay in uu u safray dalka Uganda ee dariska la ah kenya balse uu ka soo laabtay markii dagaalo ay ka dhaceen.
Sababaha ku kalifay in uu dib ugu soo laabto gurigooda ayuu ku sheegay in ay tahay xanuun la soo darsay uuna ogaaday in uu xiligaan u baahn yahay in caawimaad uu helo.
Rah sheegi kara haweenka uurka leh
LAYAABKA- Sawirro:- Dhaqtar nolosha ku aasa bukaannadiisa (Sheeko kaa yaabin doonta)
Gabar aan caadadii Waayin oo Canug Dhashay (Sheeko Layaab Badan)
DAAWO LAYAABKA: Daanyeer bas wada